Tag: uru | Martech Zone
Ndị ọmarịcha ahịa na-enwe ọ talkingụ n’ikwu okwu banyere Laghachi na ntinye ego. Nyaahụ, agara m nzukọ na ụlọ ọrụ na-ere ụlọ nke nwere ụfọdụ nsogbu na atụmatụ weebụ ha. Ha broshuọ saịtị a na-adịghị na-akwọ ụgbọala ọtụtụ na-eduga na ha na-emefu nnọọ a bit nke ego na a ọnụ ọgụgụ nke mpụga mmemme iji ụgbọala na-eduga n'ime ha ahịa foneelu. Nsogbu anyị chọpụtara bụ na ha na-akwụ ụgwọ ụlọ ọrụ ndị ahụ niile iji soro ha na-asọmpi
Ebe ọ bụ na Google nwere ọtụtụ ahịa ọchụchọ ahụ, anyị na-elekwasị anya na ha ntakịrị. Agbanyeghị, Bing ji nwayọọ nwayọọ na-ewekọ oke ahịa ma wepụta ụfọdụ ọmarịcha ngwa pụrụ iche - gụnyere gam akporo na iPad. Offọdụ atụmatụ nke ngwa ndị ahụ na saịtị Bing n'onwe ya adịla mma nke ukwuu na anyị elelee Google gbaziri ma bulie igwe ọchụchọ nke ha n'otu ụdị ahụ. Ndepụta nke Bing dị ezigbo mma
Kedu ka ụlọ ọrụ gị si enweta uru? Ihe mgbaru ọsọ nke ụlọ ọrụ gị ọ dabara na iwulite uru ahụ? Ihe mgbaru ọsọ ndị otu njikwa gị ọ bụla etinyere iji kwado ebumnuche ụlọ ọrụ gị? Ihe mgbaru ọsọ ndị ọrụ gị ọ bụla dabara na ebumnuche njikwa gị? A na-atụle arụmọrụ ndị ọrụ gị na ebumnuche ha? Ekpebiri ụgwọ ọrụ onye ọ bụla site n'otú ha si emezu ebumnuche ndị ahụ? Nkwụghachi ụgwọ onye ọrụ ahụ dabara na mmetụta na-ezute ebumnuche ndị ahụ